Ntughari na Ntughari iji Meziwanye Ahia Ngosiputa vidiyo | Martech Zone
Ntughari na Ntughari iji Meziwanye Ahuma ahia vidiyo
Chọ ụlọ ọrụ ntụgharị asụsụ dị elu nwere ike ọ gaghị abụ ihe mbụ ị na - eche mgbe ị na - ekpebi ụzọ kachasị mma iji mee iji kwalite mgbasa ozi vidiyo gị, mana ikekwe ọ ga - adị. Ọrụ ntụgharị vidiyo nwere ike inyere gị aka ịbawanye echiche na mmekọrịta onye nlere na vidiyo gị. Ọ dị mkpa icheta na ịchọrọ ntụgharị okwu ziri ezi yana gị onwe gị lelee ọrụ niile iji hụ na ọ bụ ntụgharị asụsụ dị mma.
Ntụgharị asụsụ dị elu nke vidiyo nwere ike inyere aka ịbawanye visibiliti nke mgbasa ozi ahịa vidiyo gị site na inyere gị aka ịhazi vidiyo gị sụgharịrị na ntinye dị elu na peeji nsonaazụ ọchụchọ ahụ, ọ bụghị naanị na Google kamakwa na ntanetị Youtube dị n'ime. N'ezie, ọrụ ntụgharị asụsụ dị mma nwere ike inyere aka ịbawanye ọ bụghị naanị mkpọsa ahịa vidiyo gị ma ọnụnọ mba ụwa gị n'akụkụ niile nke ịre ahịa n'ịntanetị.
Youtube bụ weebụsaịtị nke kachasị ewu ewu na ịntanetị, na-agbada n'azụ Google. Ma Youtube na-ewu ewu na ọrụ abawanyewo nke ukwuu dị ka ihe sitere na ọrịa Covid-19. Dabere na Soro Google Chee, ndị mmadụ na-atụgharị na Youtube n'ọnụ ọgụgụ na-aba ụba maka ụdị ozi niile ọtụtụ ndị na-echetụbeghị tupu mgbe. Otu n'ime ụdị vidio kachasị ewu ewu ugbu a na-ekpori ndụ ọtụtụ elele bụ usoro nri, vidiyo nke N'onwe Gị (ma ọ bụ Mee Onwe Gị), otu esi belata nchekasị, ịmụ akwụkwọ ntanetị na vidiyo nke ụlọ.
Onye ọ bụla n'ime echiche ahịa ahịa vidiyo ahụ nwere ike ịdị ukwuu maka ahịa ndị na-emetụta vidiyo, mana mgbe ejikọtara ya na ozi ndị ọzọ na ike na ịdị irè nke mkpọsa ahịa vidiyo vidiyo Youtube, ndị a nwekwara ike inyere aka melite nsonaazụ ahịa vidiyo vidiyo gị.
Youtube video marketing mkpọsa nwere ogologo oge otu n'ime ihe na-akpata nsogbu n'azụ otu ndị mmadụ si achọ n'ịntanetị chọpụta ihe ha ga-eme ma ọ bụ na ha agaghị azụta n'ịntanetị. Enwere ndepụta zuru ezu nke ọnụ ọgụgụ ahịa vidiyo dị na Blog Hubspot na-ekpughe sara mbara ma baa uru maka ahịa vidiyo, gụnyere:
80% nke ndị na-ere ahịa na-eji akụ anya na ahịa azụmaahịa ha. Vidio (63%), naanị ya, makarịrị ịde blọgụ (60%) na ojiji dị ka akụ na-elekọta mmadụ mgbasa ozi ahịa.
Ihe Mere Ntughari vidiyo na Nsụgharị Na-arụ Ọrụ
Nyere ọdịdị nke ọtụtụ ngwá ọrụ na-edezi vidiyo nke oge a na mmemme, ọ na-adọrọ adọrọ ka ịdebanye ndepụta okwu na vidiyo ma chefuo ya. Ọ bụ ezie na nke a bụ azịza dị mfe maka edezi vidiyo, ọ bụghị n'etiti ngwọta kacha mma maka mkpọsa vidiyo vidiyo. N'ihi gịnị?
A na-ele otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ọrụ ntanetị na-ekiri vidio na 85% nke vidiyo Facebook na-ele anya na-enweghị ụda ọ bụ ezie na ndị mmadụ na ngwaọrụ mkpanaka na-elekarị vidiyo na-enweghị ụda.
Faịlụ nwere ndepụta okwu abụọ na nke mechiri emechi na-enweta obere echiche na mmekọrịta. Vidio ndị nwere ederede transcript mechiri emechi ma ọ bụ faịlụ srt egosiri na inwe ọnụ ọgụgụ nke echiche, mbak, amasị na nkọwa.
ndị a srt edere faịlụ site na ntinye vidiyo site na engines ọchụchọ. Nke a na - abawanye ọnụ ọgụgụ nke isiokwu gị na vidiyo gị ga - akwado nke ọma, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ vidiyo na mkpọsa ahịa vidiyo gị. Nke a na-emekwa ka o kwe omume na a ga-ahụ vidiyo gị na ihu ihu nke ibe nsonaazụ njin ọchụchọ yana vidiyo ndị a tụrụ aro na Youtube.
Ọrụ ntụgharị vidiyo na-enyere gị aka ịbawanye ọnụ ọgụgụ Keywords nke vidiyo gị na-akwado n'ọtụtụ asụsụ ị chọrọ iji. Ugbu a, ndị na-ege ntị sara mbara na nke sara mbara karị ga-enwe ike ịnụ ụtọ vidiyo ahụ, ọ bụghị naanị n'asụsụ ala gị, ma n'otu oge ahụ, na-abawanye ọnụ ọgụgụ nke isiokwu vidio ahụ ga-ahazi, na-abawanye visibiliti na mmekọrịta nke vidiyo gị. mgbasa ozi ahịa.
Ntughari vidiyo na Rev
Ngosi: Anyị bụ ndị mmekọ Rev.
Tags: srttranslationahịa vidiyontụgharị vidiyontụgharị vidiyoọrụ ntụgharị vidiyoyoutube
Ebumnuche 5 Ihe kpatara azụmahịa gị ji achọ atụmatụ azụmaahịa vidiyo